Maxaad ka Taqaanaa Ninka Talada Ethiopia Loo Dhiibay * Haile Marian Deselenge*
Maxaad ka Taqaanaa Ninka Talada Ethiopia Loo Dhiibay * Haile Marian Deselenge* Sabti 25 August 2012 SMC
Dalka Ethiopia waa waxa ku nool dad aad u fara badan, dadkaas oo ka soo kala jeeda Qooomiyadu kala duwan oo aan isku dhaqan iyo isku Diin midna ahayn, Qoomiyadahaa waxa kaliya ee isku hayaa waa jiritaanka Dawladnimo ee ka dhisan dalka. Dadkaa iyo Qoomiyadahaa kala duwan waxa ka dhexeeyey nacayb fog oo soo jiray muddo aad u dheer, kaas oo salka ku haya talada iyo hogaaminta dalka. si-kasta ha layso necbaado haddana waxa ay ku qasbanaadeen dadka reer Ethiopia Casriga la joogo maanta in ay kuwada hoos noolaadaan hadh-ka dawladnimada dalkooda Ethiopia.
Dhimasahada Males Zenawi waxay furtay taariikh cusub dhinaca hogaaminta siyaasada dalka Ethiopia, waa markii kowaad oo uu hogaanka u qabto nin aan dhalasho ahaan ka soo jeedin labada qoomiyadood ee Amxaarada iyo Tigray-ga, gaar ahaan 200 sano ee u danbeeyey.
Inkasta oo aan la sadaalin karin in dib loo doorto marka la gaadho doorashada dhici doonta 2015, ilaa iyo iminka waxa la hubaa in uu Mr. Haile Marian Deselenge uu xukumi doono dalka inta doorashadaa laga gaadhayo, sababta keentay in uu dalka hogaankiisa qabto waa mid ku timi Distoorka dalka u yaala oo sidiisii loo raacay ama loogu dhaqmay.
Mr Desalenge wuxuu ku dhashay Degmada Boloso Sore ee degaanka Wolaita, halkaas oo uu ku barbaaray, waxbarashadiisiina inteeda badan uu ku soo qatay. Sanadkii 1988 waxa uu jaamicadda Addis Abeba ka qaatay shaadadiisa kowaad oo Engineering uu ku sameeyay, ka dibna wuxu tagay jaamicadda Tempere University of Technology ee dalka Finland, halkaasi oo uu ka qaatay shahadadii labaad ama Master degree. Markii uu Ethiopia dib ugu soo noqday waxa uu gudoomiye ama Dean ka noqday machadka loo yaqaano Water Technologe institute oo lagu barto cilmiga biyaha, 13 sano mudo gaadhaysa ayuu halkaa ka shaqaynaayey. Jagooyinkii ugu dambeeyay ee uu hadda hayey ee ahaa ku -xigeenka wasiirka kowad iyo wasiirka arimaha Dibada waxa loo magacabay sanadkii 2010 isaga oo markaa kala wareegay ninka la yidhaahdo Seyoum Mesfin oo isagu xilkaa hayey mudo 19 sano ka badan, isla markaan ahaa Males Seedigii
Marka loo eego Qomiyad ahaan Mr Haile M. Desalenge waxa uu kaga duwan yahay hogaamiyashii hore ee Ethiopia soo xukumay, waxa uu isagu ka soo jeedaa qoomiyadda Wolayta oo sooc ah (iska-dhal ah) kuwaas oo u badan dhinaca koonfureed ee Ethiopia. Qawmiyadaha kale ee dalka waxba uma galaan ama wax dhiig ah kuma leh, halka hogaamiyayaashii ka horeeyey ay u badnaayeen kuwo qoomiyado kala duwani iska dhaleen, Tusaale ahaan Males oo isaga ka horeeyey waxa la sheegaa inay iska dhaleen Tigray iyo Axmaro, Mangistu laftiisu Amxaaro ayuu cad ku lahaa, Haile Salase wuxuu ahaa Amxaar, Uraagada-na dhiig ku leh.
Ilaa laga gaadhayo Melelik -kii labaad, hogaamiyayaashu waxay ahayeen kuwo Axmaaro raad ku leh, waana arinta hada ahaan walwalka weyn ka dhalan karo oo loo arki kari haddii uu ninkani mesha sii hayo in xukunkii dalka Ethiopia uu noqonayo mid qawmiyad kaliya ku sii ururaaya.
Mr Desalenge waxa uu madax ka ahaa mid kamid ah xisbiyada maqaarsaarka ah ee aan doorka siyaasadeed lahayn, Xisbigiisa waxa la odhan jiray SNNPR kaas oo inta badan laga tageero gobolada koonfureed ee uu ka soo jeedo, ka dibna waxa laga dhigay ku-xigeenka gudoomiyaha xisbiga EPRDF ee hadda talada dalka haya.
Inakstoo aan la filaynin inuu talada dalka sii hayn doono mudo dheer si lamid ah intii uu xilka hayey Males, hadana waxa la rumaysan yahay in sababta kaliya ee hada xukunka dalka loogu dhiibay ay tahay arin la xidhiidha dhanka distoorka dalka iyo sidii uu ugu dhawaa hogaamiyii ka horeeyey oo gacan-yare daacada u ahaa, isla markaana uu la taliye uga ahaa dhinacyada arimaha bulshada.
Hadii aynu jaleecno siyaasad ahaan xaaladda uu dalku ku sugan yahay iyo waxa ka dhalan kara dhimashada Meles, waxa la odhan karaa Zenawi wuxuu ka tagay geedi-socod siyaasadeed oo uu hogaankiisa kaligii si buuxda gacanta ugu hayey, taas oo adkaan doonto in la helo qof halkii ka sii wada, waxaanay u badantahay isbadalo siyaasi ah in ay la yimaadaan cid kasta oo talada dalka uga danbaysa taasi oo horseedi karta khalkhal iyo burbur ku dhaca jiritaanka Ethiopia.
Cabashooyin-ka aadka u culus ee dalka ka jira waxa keena ama sababa cududda iyo awoodaha loo isticmaalaya in lagu muquuniyo qaar kamid ah qawmiyadaha dalka. Marka laga reebo qomiyada Tigre-ga ah cid walba wax bay tabanaysaa , baryahan dambana waxa soo xoogaysanayay cabashooyin ka soo baxayay dadka muslimiinta ah oo dareensanaa in si gaara loo bar-timaameedsado, iyado loo aanaynaayola dagaalanka Argagixisada ee ka socda Bariga Africa, Geeska Africa.
By: Osman Abdillahi Sool....Freelance Journalist. sooldhuub@hotmail.com